Adeegga leexinta CNC - OUZHAN GANACSI (SHANGHAI) CO., LTD
Custom Precision CNC Turning Lathe Service-OEM / ODM Shiinaha CNC Qaybaha Wareega Soo Saaraha
Ouzhan waa qibrad & khibrad qibrad leh Adeegyada leexinta CNC qeybiyaha, soo saaraha, ganacsadaha iyo dhoofiyaha Shiinaha, wuxuu ku takhasusay bixinta xirfadle Adeegyada leexinta OEM / ODM CNC tayo sare leh laakiin raqiis ah Qaybaha leexinta CNC, Qaybaha lathe CNCama qaybo sare oo saxsan oo mashiinno casri ah iyo hawl gacmeed xirfad leh. Sida qaybaha gacmaha, qaybaha saxanka, qaybaha wiishka, maydhayaasha, boolal, qalabka tuubada, iwm.
Kuwii hore CNC leexintaxarumaha iyo adeegyada caadadu waxay taageeraan qalab kala duwan, oo ay ka mid yihiin naxaas, bir bir ah, birta kaarboon, aluminium, titanium iyo caagagga. Waxaan had iyo jeer qabanqaabin doonnaa habka ugu habboon ee leexashada, iyadoo lagu saleynayo fulinta dhammaan shuruudahaaga, waxaan inta badan yareyn karnaa qiimahaaga illaa heerka ugu sarreeya. CaadadayadaAdeegyada makiinada CNC had iyo jeer hubi in macaamiisheena ay heleen tayada ugu sareysa CNC waxay u jeesatay qaybo iyo adeegyada ugu fikirka badan.
Ouzhan Qeexitaanka Awoodaha CNC iyo Qalabka:
OuZhan waxay awood u leedahay inay bixiso adeegyo qiimo jaban oo CNC u rogaya adeega lathe iyo waxsoosaarka tayada sare leh ee mashaariicda tirada badan.
- Taageer wax soo saar dufcadeed oo hooseeya, dhexdhexaad ah ama heer sare ah
- Soosaarid deg deg ah iyo soosaarid adeegsi dhamaadka ah
- Saxsanaanta cabbirka sare, waxsoosaarka xawaaraha sare iyo isku halaynta sare
- Baaxad ballaaran oo ah biraha ikhtiyaariga ah iyo qalabka balaastigga ah
- Waxsoosaar xoog leh iyo waqtiga dhalmada oo degdeg ah
- Dhammaadyo loo baahan yahay iyo dulqaadasho adag ayaa la heli karaa
Maxaad u Doortaa Adeegyada Wareejinta ee Ouzhan CNC
1. Qalabka Warshadaha Hi-Tech
Qalabkayaga wax soo saar ee muhiimka ah waxaa laga keenaa Switzerland iyo Japan, kuwaas oo macaamiisha siin kara qiime jaban oo CNC ah.
2. Awoodo wax soo saar badan oo CNC ah
Ujeedka leexashada, waxaan ku takhasusay shiidida, lathing, qodista, leexinta CNC iyo howlaha wax shiida, sidaa darteed waxaad ka heli kartaa xul ballaaran oo ka mid ah qaybaha mashiinnada CNC kooxdeena lagu kalsoon yahay.
Waxaan haynaa 10 injineer oo ku sugan xarunteena R&D, dhamaantood waa dhakhaatiir ama macalimiin ka socda Jaamacada Sayniska iyo Teknolojiyadda Shiinaha. Waxaan bixin karnaa naqshadeynta ugu xirfadda badan ee CNC iyo adeegyada injineernimada CNC.
Liiska mashiinada Ouzhan CNC
5-dhidibka xarunta wax lagu shiido
4-dhidibka xarunta wax lagu shiido
3-dhidibka xarunta wax lagu shiido
Booqday Furimaha Dagaalka
Mashiinka kalagoynta Keyway
Xarunta calaamadeynta laser
Waa Maxay Adeegga leexinta CNC & Sida ay u rogmato CNC
Leexinta CNCwaxay soo saartaa qaybo leh astaamo cilmiyaysan iyadoo ka saareysa walxaha biraha ama ulaha balaastigga ah iyadoo la adeegsanayo jarayayaal, layliyo xarunta ama qalab toos ah. CNC Turning wuxuu adeegsadaa mashiinada kumbuyuutarka lagu xakameeyo si loo abuuro wax soo saar kama dambeys ah oo kala duwan. Nidaamku wuxuu adeegsanayaa qalab hal dhibic goyn ah oo galiya isbarbar dhiga maaddada la jarayo. Maaddadu waxay ku wareegsan tahay xawaaraha isbeddelka iyo goynta qalabku si ay u abuuraan jaritaanno goobeed leh cabbiraad sax ah. Waxaa loo isticmaalaa in lagu abuuro wareeg ama tubularshares qaybo waaweyn. Waa nidaam otomaatig ah oo xawaaruhu wuxuu noqon karaa hagaajin loogu talagalay saxsanaanta weyn halkii laga rogi lahaa lathe gacanta.
Marka ay timaado nidaamka leexinta CNC, habka wax soosaarka kala-goynta waxaa caadi ahaan lagu sameeyaa lathe CNC ama leexashada xarunta. Goynta ka hor, G-koodhka iyo mashiinka leexashada ayaa u baahan in la diyaariyo, ka dibna la hubiyo baarka madhan ee alaabta keydka ku jira ee dunidda dunmiiqa, cufku wuxuu ku hayaa gabalka booska markii dunku wareego Iyada oo dunku ku wareejinayo xawaare gaar ah, hal dhibic oo halbeeg ah oo CNC leexleeyaha ah wuxuu ku dhaqaaqi doonaa waddo toosan oo u dhiganta dhidibka wareegga isla markaana ka saari doona waxyaabaha xad-dhaafka ah, yareynaya dhexroorka dhismaha, caddee cabbirka oo abuuro dhammaystir wanaagsan, si hel caadadii u dambeysay ee CNC u jeesatay qaybo leh faahfaahin la doonayo.
Qalabka Beddelaya CNC - Qalabka loo isticmaalo CNC Lathes
Fudud, Daawaha & Qalabka birta
Bir khafiif ah 1018
Bir khafiif ah 1045
Bir khafiif ah A36
Fasalka Titanium 1
Fasalka Titanium 2
Qalabka birta O1
Qalabka birta A2
Qalabka birta A3
Qalabka birta D2
Qalabka birta S7
Qalabka birta H13
Codsiyada Adeegyada Leexinta CNC iyo Qaybaha
Ouzhan CNC Milling oogadiisa Ayaa Dhamaatay